Serge Aurier Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Home AFRIKA CARUURTA FOOTBALL Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Ivory Coast Serge Aurier Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'nickname'Bison". Our Sergeer Aurier Childhood Story plus iyo Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa nolosheeda ka hor taariikhda qoyska, asalka qoyska iyo xidhiidhka nolosha. Intaas waxaa sii dheer, xaqiiqooyin kale oo OFF-Pitch (wax yar oo la yaqaan) oo ku saabsan isaga.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay waxa uu haysto iyo murqaha. Si kastaba ha noqotee, dhowr ka mid ah tixgelinayaan Serge Aurier's Bio kaas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Serge Aurier Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan 'Uncertain Biography' Hore iyo Qoyska
Bilowgii, Serge Aurier wuxuu ku dhashay maalinta 24th ee December 1992. Waxa uu u dhashay waalidkiisa Mr Mrs Leon Gbizie ee gobolka Galbeedka Ivory Coast, oo ku dhex yaal magaalo yar oo la yiraahdo Danane.
Serge wuxuu ku dhashay cunug labaad oo ah shan carruur ah. Waxa uu ku soo koray gurigiisii ​​kubada cagta waxaana u mahadceliyey aabihiis oo ahaa ciyaaryahan xirfadle ah. Leon Gbizie ka dib markii uu howlgabay ka noqday kaaliyaha maamulka Maxkamada degmada ee Ouragahio, Ivory Coast. Hoos waxaa ku yaal sawirka Leon iyo wiilkiisa.
Serge Aurier wuxuu sagaal sano jirsaday sagaal sano oo uu noloshiisa la noolaa waalidkiis ka hor inta aysan kala tagin iyo furitaanka taas oo calaamad u ah bilowgii asalkiisa murugsan.
Sannadkan 1992, markii Serge uu yahay 10 sano, dagaal sokeeye ayaa ka qarxay waddankii Ivory Coast. Marka loo eego codsigii hooyadiis, Sergeer yar ayaa ku khasbey in ay u guurto France si ay uga tagto aabihiis aabihiisa Afrika.
Serge Aurier Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan 'Uncertain Biography' Nolosha Paris
Markii uu ku soo laabtay France, hooyada Serge ayaa helay jaceyl ka dib markii furiinka ka yimid ninkeeda. Waxay la kulantay oo ay guursatay darawal bas oo magaciisu yahay Michel Aurier oo aqbalay inay korsadaan wiilkeeda. Waxay ahayd waqtigan Serge helay magaca qoyska "Aurier". Serge ayaa degay hooyadiis, adeerkiis iyo walaalkeed, Christopher oo ku yaala xaafada Satran ee ku taal xaafada Paris.
Sida dad badan oo muhaajiriin ah oo Afrikaan ah, Sergi Aurier's Family ayaa iyaguna ka helay mid ka mid ah xaafadaha ugu saboolsan caasimadda Faransiiska. Xaafadaha Sevran waxaa sidoo kale lagu dhaleeceeyay warka dambiilenimo, dambiyadeeda, rabshadaha iyo shaqo la'aanta. Dhab ahaan, wada-xaajoodka marnaba laguma ammaanin midnimadooda.
Ma ogeyd... Sevran, oo ah wada-xaajoodka Faransiiska mar uu caan ku noqday xayiraadda 6-maalin gaajo oo ay goobjoog ka ahayd duqa magaalada geesinimada Stephane Gatignon. Stephane ayaa ku guuleystay doorashadii gaajada guulaystay si ay ugu dhiirrigeliso xukuumadda in ay gacan ka geysato sidii loo maalgelin lahaa tallaabooyinka si loo yareeyo dhibaatada ka jirta degmada. Hoos waxaa ku qoran sawirka duqa magaalada.
Aurier mar hore qirtay in inta lagu guda jiray maalmaha hore, arrimaha danbiyada ayaa ahaa mid aad u adag. Intaa waxaa dheer, nolosha dhallinyaradeeda ee Sevran ma ahayn mid aan waxba galabsan. In uu erayadiisa;
"Sevran way dejisay. Ka hor, waxay ahayd mid khatar badan, aad u xun. Waxay ahayd wax laga cabsado. Dhibaato ayaa ka jirtay meel walba
Kadibna, waxaan ku dhegay jilayaal shaati ah. way adag tahay inaad iska ilaaliso marka aad halkan ku nooshahay. Taasi waxay xoojisay maskaxdayda "
Ilaa waqtigaa, Aurier weligeed ma aysan suuroobin in ay si buuxda u ruxaan muuqaalka dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee lagu sameeyay dhalinyaradiisii ​​oo ay isbedel ku yimaadaan, iyo bulsho adag oo adag.
Serge Aurier Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan 'Uncertain Biography' Dhismaha Xirfadaha
Ka dib markii uu ku soo kordhay magaalo muran dhalisay, waxa uu ku dhamaatay Serge markii uu kubad cagaha ku ciyaarayay. Serge ayaa saxaafada u soo bandhigay kubada cagta oo uu helay Mr Afid Djaadaoui (hoos ka eeg) kaas oo mas'uul ka ahaa waxqabadyada cayaaraha furan ee Sevran.
Afid wuxuu kaloo ahaa abuuraha "Ka hortagga ciyaaraha ", a barnaamijka kaas oo u ogolaaday Aurier iyo walaalkiis Christopher inay ku biiraan caruurta kale inay ciyaaraan tartan tartan ah.
Serge Aurier Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan 'Uncertain Biography' Maxkamadaha
In kasta oo uu iskuul tagayay, ayaa Serge noqday qayb ka mid ah tartamada xaafadaha lagu qabto Arbacada iyo Sabtida. Isagoo daawanayay daawadayaashiisa oo uu la socdo taakuladiisa, Serge bilowgii bishii Agoosto 2005 wuxuu bilaabay inuu soo bandhigo tijaabooyinka U13. Waxa uu ku guuleystey tijaabadii guuleysiga ee kooxda Villepinte.
Inkastoo uu u ciyaaro kooxda dhalinyarada, Serge ayaa loo arkay inuu yahay qof weyn go'aaminta ah in riyadiisa mihnadiisu ay run tahay. Xitaa isagoo hogaanka u haya kooxdiisii, himiladiisa mustaqbalku ma ahan mid kaliya oo soo mara.
Horumarka koray, Aurier wuxuu bilaabay inuu helo naaneyska Makelele iyo Essien sababtoo ah wuxuu ciyaaray kaalintiisii ​​iyo jir ahaaneed iyo farsamo ahaanba. Waxa uu ahaa mid yar, laakiin runtii iyo murqaha meel kasta.
Aurier wuxuu u eg yahay xajmigaas isaga oo si degdeg ah uga tagay Lens, halkaasoo isaga iyo walaalkiis Christopher uu saxiixay. Kadib markii uu saxiixay dabka, labadaba walaalaha waa inay ka tagaan qoyskooda iyo asxaabtooda.
Serge Aurier Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan 'Uncertain Biography' Kusoo caan bax
Aurier oo ku jiray da 'yara aad u jilicsan ayaa noqday kabtanka kooxda Liverpool ee kubada cagta. Qandaraaskiisa ugu horeeyay wuxuu saxiixay da'da 16 ee 2009. Kooxaha kale ee Faransiiska ayaa ku dhuumaaleysanaya kooxda Lens ee sanadka labaad. 2012, Aurier ayaa u xaqiijisay inay u dhaqaaqday Toulouse. Waxa uu bilaabay inuu u ciyaaro daafaca midig daafaca wuxuuna soo bandhigay qaab ciyaareedkiisa difaaca ee kooxda.
Isagoo khatar galinaya qandaraaska iyo difaaca difaaca ayaa helay daneyntii PSG kaasoo uu amaah ku qaatay ka hor inta uusan xirin heshiis joogta ah. Guud ahaan, Serge ayaa ku guuleystay koobabka ugu weyn ee horyaalka Faransiiska Faransiiska ka hor inta uusan go'aansan inay aheyd inuu ka tago horyaalka.
31 August 2017, Aurier ayaa u saxiixay Tottenham Hotspur lacag gaareysa £ 23 million. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Serge Aurier Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan 'Uncertain Biography' Nolosha Xiriirka
Inkastoo xiriirka kubada cagta Afrika ee kubada cagta ee qaab ciyaareedkoodu aad u sareeyo, uu noqday mid ku dhow qandaraaskiisa, hadana waxaa la yaab leh in Serge uu weli sheeganayo inuu yahay kaliya. Xilliga qorista, Serge waxay ahayd mid aan ka yarayn oo uu naftiisa u qariyay dadkiisa.
Serge Aurier Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan 'Uncertain Biography' Joogitaanka Aabaha
Codka dadwaynaha ayaa waxaa sameeyay Leon Gbizie oo ah aabaha Serge Aurier oo ka cabanaya inuu ka tagay isla markaana la dayacay gebi ahaan wiilkiisa. Gbizie ayaa sheegtay in wiilkiisa uu ilowsiiyay sanado badan (tan iyo markii uu hooyo u raacay Faransiis). Waxa uu u sheegay war saxaafadeedka Ivorian inuusan garowsan karin sababta uu u noqon lahaa aabaha wiil dhalinyaro ah oo bilaash ah, isla markaana wuxuu ku nool yahay sidii xayiraad.
Sida laga soo xigtay Gbizie, wiilkiisu wuxuu diidey inuu xiriir la yeesho isaga oo kaliya bixinaya kharashkiisa caafimaad si uu u bogsado cudurka isaga oo curyaan ah. In uu erayadiisa;
"Ma aanan la kulmin wiilkeyga sannado dhow. Waxaan mar walba isku dayaa inaan gaaro marka uu joogo xerada xulka qaranka. wuu iga leexday oo had iyo goor wuu u jawaabaa farriinteyda iyada oo mid ka mid ah asxaabtiisa, "
Ayuu yiri Gbizie.
"Maxay iigu xanuun badan tahay in wiilkaygu xitaa ogaado waxa aan qabo. Wuxuu kaliya i siiyaa lacag si aan uga takhaluso. Weligiis iigu yeedhin, taasina waa sababtoo ah hooyadiis ayaa madaxa ku ridday "
Serge Aurier Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan 'Uncertain Biography' Dib u heshiisiinta aabaha
Marka la eego wiilkiisa oo magaciisa ku dhaliyey oo keliya ayaa xanuun badan u keenay Gbizié Léon. Si kastaba ha noqotee, hal shay ayaa hubaal ah. Waxa uu rajeynayay in qayladiisa dadweynaha ay u gudbinayaan saxaafada uu gaari doono wiilkiisa. Si ka duwan Mario Balotelli, Xaaladda hubaal ma aysan saameynin xiriirka ka dhexeeya Aurier iyo aabbihiis.
Maalinta ay soo martay: Xilligii ugu weynaa ee isbarbar-dhigga ayaa ugu dambeyntii yimid labada nin.
Hoos waxaa ku yaal sawir Aurier oo ku yaala 2015 aabihiis oo ku yaala Hotel Sofitel ivoire kadib markii 14 sanooyin aan isku arag.
Serge Aurier Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan 'Uncertain Biography' Diiwaangelinta Diiwaanka
Serge ayaa mar la xiray isla markaana maxkamad lagu soo oogay maxkamad si loo dhibaateeyo sarkaal bilays ah oo ka baxsan goobta lagu caweeyo ee Paris. Waxaa lagu helay dembiile ah oo u hoggaansamaya isaga oo xabsi ku jira xabsi laba bilood ah. Nasiib wanaag, Serge waxaa la siiyay xorriyad iyadoo la sugayo racfaan.
Xiritaankan ayaa caqabad ku noqday horumarka uu galay ka qaybgalka tartanka UEFA Champions League ee Arsenal ku dhexmaray 2016 maaddaama Visa ay siisay isaga oo u fasaxay hay'adaha UK.
Ma ogeyd?... Tottenham ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay Aurier u soo bandhigtay saxiixoodii ugu dambeysay ka dib markii uu la kulmay tartanka qolka maxkamada si uu ugu dambeyntii u xaqiijiyo fiisada UK.
Serge Aurier Childhood Story Plus Xogta loo yaqaan 'Uncertain Biography' Xaqiiqooyinka Qofka
Serge waxay leedahay xornimo madaxbanaan oo u suurtogelisa inuu horumar ka samaysto noloshiisa gaarka ah iyo shaqadaba. Waa qof ka baranaya qaladaadka iyo kartida uu u leeyahay inuu kor ugu soo baxo wuxuu ku saleysan yahay khibradiisa iyo khibradiisa.
Serge waa Halloween oo ka warqabta sida loo helo habka ugu wanaagsan ee roodhida habeenkii Halloween.
Aurier wuxuu jecel yahay muusig fiican maadaama uu yahay taageere weyn oo ah hip-hop. Waxa uu magacaabay Shakira, Justin Bieber, iyo Sefyu oo ka mid ah fanaaniinta uu jecel yahay. Marar badan, waxaa lagu arkay maqalka.
Heer sare: Aurier ayaa lagu soo waramayaa inuu u yeeray Di Maria in "sida saxda"Iyo Laurent Blanc"xayiraadda nacaybka". Ficilkan wuxuu cambaareeyay go'aanka maamulka maamulka PSG inay joojiyaan isaga.
Hantida FACT: Waad mahadsantihiin akhrinta Serge Aurier Childhood Story iyo akhristaha sheekooyinka aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
PSG Wareysiga Kubadda Cagta
Pierre-Emile Hojbjerg Sheekada Carruurnimada Plus Xaqiiqooyinka Taariikh nololeedka Untold
Tanguy Ndombele Carruurnimada Sheeko Xaqiiqooyin Wacan Lahaa
Ryan Sessegnon Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
Thilo Kehrer Storyhood Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Thomas Tuchel Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha aan la Ogeyn
Adrien Rabiot Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Kyle Walker-Peters Story Story Sheeko Xaqiiqo Weyn
Eric Dier Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha ee aan la isku qorin